I-Deltek ConceptShare: UPhononongo lobuGcisa, ukungqina, kunye nokuVunywa kwi-Intanethi | Martech Zone
I-Deltek ConceptShare: UPhononongo lokuYila, ukungqina, kunye nokuVunywa kwi-Intanethi
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 25, 2020 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 25, 2020 Douglas Karr
Njengoko iinkampani zifuna ukukhulisa imveliso kunye namaqela amancinci, bafuna izixhobo ezinokubanceda ukuba bandise ukusebenza ngokukuko. Ukuthengisa kunye namaqela ayilayo oko kuthetha ukuhlangabezana neemfuno zeprojekthi ngexesha, ukunxibelelana nomthengi okanye abantu osebenza nabo, ukugqiba ukuhlela, ukufumana imvume kunye nokuhambisa iprojekthi ngexesha elimiselweyo.
Kulapho Ingqondo kaDeltek isisombululo sinokunceda. Isixhobo senza ukuba ukuthengisa kunye namaqela okuyila ahambise umxholo ngakumbi ngokukhawuleza kwaye ngexabiso eliphantsi ngokulungelelanisa nokukhawulezisa uphononongo kunye nenkqubo yokuvunywa.
Deltek ConceptShare Iimpawu kunye neziBonelelo
Gcina iQela lakho loPhononongo liLungelelanisiwe -Yabelana ngokukhuselekileyo nomsebenzi kunye nabathengi kunye nabavavanyi bangaphandle, yenza ngokulula uphononongo ngeparamitha ezichazwe kakuhle kunye nexesha elibekiweyo, kwaye wazise ngokuzenzekelayo iqela lokujonga kwakhona ixesha elibekiweyo kunye neenguqulelo ngexesha langempela.
Fumana impendulo ecacileyo Hlaziya amaxwebhu, imifanekiso, iividiyo, amaphepha ewebhu, nokunye, umaki kunye nokubeka izimvo ngokuthe ngqo kwi-asethi kwindawo yokusebenzela, kwaye usebenzisane kwaye ucacise ingxelo ukunqanda umsebenzi ongafunekiyo.
Hlaziya uMjikelo woPhononongo -Ukugcina ulawulo lwenguqulo engqongqo ukuqinisekisa ukuba wonke umntu uphonononga eyona asethi ihlaziyiweyo, uqinisekisa utshintsho lwenziwe phantsi kwe-pixel ngokuthelekisa icala necala, kunye nokubeka phambili, iflegi, kunye nokuhluza ingxelo ukuze izidalo zazi ukuba loluphi uhlaziyo ukwenza.
Ukulandelela kunye nokuPhathwa kweNkqubo yokuSebenza Uphononongo lophicotho-zincwadi olunobungqina bexesha lokufakwa kwezicelo zohlaziyo kunye nokuvunywa, sebenzisa isishwankathelo seempendulo ukufaka yonke ingxelo kuxwebhu olunokwabelwana ngalo, kwaye kubandakanya nezithonjana ze-asethi ukubonelela ngesiqinisekiso esibonakalayo seenguqu eziceliweyo.
Ubungqina obu-Intanethi kunye noPhononongo lokuYila lwaMaqela angaphakathi kweNdlu
I-34% yee-arhente ezingaphakathi endlwini zithi amaqela abo okudala achitha iiyure ezisi-7 okanye nangaphezulu ngeveki kwimisebenzi efana nokudibanisa ingxelo kunye nokufumana ukuvunywa.
Ingxelo ka-2018 yoLawulo lweNdalo ngaphakathi. InMotionNow & InSource.
Ngempendulo yeDeltek yeConceptShare yokusebenzisana, unokuqinisekisa ukuba iqela lakho licacile, linokuphendula ngokukhawuleza kwaye ngokulula ukunciphisa iibhotile kunye nokuhambisa umxholo ngexesha.
Imisonto yokubeka izimvo kunye neempendulo zenza ukuba amaqela asebenzisane ngomsebenzi oqhubekayo
Iiflegi kunye nezishwankathelo zempendulo zahlula ingxelo enokwenzeka evela kumagqabantshintshi ngokubanzi ukuze abaDali bazi ngokuthe ngqo ukuba loluphi uhlaziyo ekufuneka lenziwe
Izaziso kunye nezikhumbuzo ziqinisekisa ukuba iqela lokuphononongwa liyazi kakuhle into efuna uphononongo kunye nemvume, nini, kwaye nini iinguqulelo ezintsha ziyafumaneka.
Fakela ukuhamba komsebenzi oku-intanethi kuwo wonke umbutho wakho ngamanqaku okhuseleko akumgangatho wamashishini
Ubungqina obuku-Intanethi kunye noVavanyo loBuchule kwiiarhente
Xa iarhente yakho ivelisa umxholo wenani lamaphulo kwinani leeakhawunti zabaxhasi, imijikelezo engapheliyo yoqwalaselo loyilo kunye nohlaziyo kunokubangela umonakalo kumgca wakho ongezantsi. Yakhelwe ngokukodwa amaqela okuvelisa anezinto ezinjengezakho, iDeltek ConceptShare izisa inkqubo yokuvavanywa kwi-intanethi ukukunceda ukukhawulezisa umjikelo wokuphononongwa- ukunciphisa iindleko zokuvelisa kunye nokukunika ixesha elininzi lokuphinda uthenge iimfuno zabaxhasi bakho.
Fumana umbono jikelele kuwo wonke umsebenzi oqhubekayo
Gcina ixesha lokuleqa ingxelo ngokucwangcisa izikhumbuzo zokugcina abagqatswa emsebenzini
Ukubeka embindini kunye nokucwangcisa iifayile kunye neembali zohlaziyo ukulungiselela uphicotho olulula
Mema abathengi kunye nabavavanyi bangaphandle ukuba banike ingxelo ngeeasethi- akukho lungelo lokungena
Iimpawu ezisebenziseka ngokulula kunye nokusebenza ngokukuko kubandakanya lula umxholo wokuhamba komsebenzi kwiarhente yakho kwimizuzu embalwa
UDeltek ngoku unika abasebenzisi ithuba lokuhambisa i-ConceptShare yasimahla ngo-Okthobha u-2020:
tags: ukwazisadeltekIngqondo yedathaimvume online yoyilouphononongo lokuyila online
Izibonelelo ezili-10 zokunyaniseka kwabathengi kunye neenkqubo zemivuzo
Umthombo weBhinary: Amava abaThengi kunye neQonga lokuLawulwa kwegama